Kulan ku aadan Xuquuqda Aaadanaha Afrika, xoogana lagu saarayo Soomaaliya oo… – SBC
Kulan ku aadan Xuquuqda Aaadanaha Afrika, xoogana lagu saarayo Soomaaliya oo…
Posted by editor on October 25, 2011 Comments
Fadhiga caadiga ah ee Xuquuqda Aadanaha ee Afrika ayaa ka soconaya magaalada Banjul ee dalka Gambia halkaasoo ay sidoo kale ka socdaan dhacdooyin dhowr ah oo loogu dabaal dagayo sanad guuradii 30aad ee kasoo wareegatay goortii la meel mariyay cahdiga xuquuqda aadanaha Afrika.
Kulankan oo ay ka qeyb galayaan mas’uuliyiin ka socda dalalka xubnaha ka ah Midowga Afrika ayaa sidoo kale waxaa ka qeyb galaya hogaamiyayaal ka socda bulshada rayidka gaar ahaan kuwa u dooda xuquuqda aadanaha.
Xaalada dalka Soomaaliya ayaa si qoto dheer looga hadlay ayadoo dhibaatada ay keeneen abaaraha iyo xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya si gaar ah looga hadlay.
Cumar Faaruuq Cusmaan oo ah Xoghayaha Guud ee Ururka Qaranka Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee NUSOJ oo isla markaana ah Guddoomiyaha Ururka Suxufiyiinta Afrika (FAJ) ayaa ka hadlay dhibaatada lagu haya suxufiyiinta qaarada Afrika, gaar ahaan kuwa geeska Afrika.
“Waxaa ayaan daro ah in Soomaaliya ay weli tahay halka loogu dilka iyo dhibaateynta badan yahay ee suxufiyiinta qaarada Africa. Sanadkan kaliya waxaa lagu dilay magaalada Muqdisho seddax suxufi, waxaa lagu dhaawacay magaalooyinka Boosaaso, Muqdisho iyo Gaalkacyo seddax suxufi, waxaan tiro laheyn cagajugleynta iyo dhibaatada lagu hayo suxufiyiinta ku guda jira howlahooda” ayuu yiri Cumar Faaruuq Cusmaan.
Sidoo kale waxaa uu sheegay Cumar Faaruuq oo guddoominaya guddiga sida gaarka loogu soo saaray in ay go’aan ka gaaraan arrimaha la xiriira xoriyatul qowlka iyo difaacitaanka suxufiyiinta in dalka Eritrea ay ku xiran yihiin tiro suxufiyiin ah oo gaaraysa 30 halka dalka Itoobiya loogu heysto eedo ku aadan falal argagaxiso shan suxufi oo laba ka mid ah u dhasheen dalka Sweden.
“Waxaan ugu baaqeynaa midowga Afrika iyo golahiisa xuquuqda aadanaha in ay qaadan dhamaan talaabooyin kasta oo muhiim ah si loo difaaco amniga iyo xuquuqda suxufiyinta. Waxaan si gaar ah aan idinkugu boorineynaa in aad la xisaabtantaan kuwa khatar geliya suxufiyiinta aadna cadaalada u raadisaan suxufiyiinta dhibka loo geystay,” ayuu yiir Cumar Faaruuq Cusmaan.
Dalalka uu ku sheegay warbixinta uu horgeeyay Cumar Faaruuq fadhiga caadiga ah ee Xuquuqda Aaadanaha oo ah midkiisii 50aad ayaa sidoo kale waxaa kaga hadlay dhibaatooyinka lagu hayo suxufiyiinta dalalka Zimbabwe, Cameroon, Nigeria, Uganda, Sudan iyo Burundi.
Fadhiga xuquuqda aadanaha ee Afrika oo la qabto sanadkiiba laba jeer ayaa sidoo kale waxaa kasoo jeediyay warbixin dheer Guddoomiyaha dalladda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga iyo Geeska Afrika Xasan Shire Sheekh, ahna Guddoomiya Dalladda Difaacayaasha Xuquuqda Aadanaha Afrika oo isna ka hadlay tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee dalalka Burundi, Ethiopia, Eritrea, Sudan, South Sudan iyo Somalia.
Xasan Shire waxaa uu tibaaxay in lixdii bilood ee lasoo dhaafay in difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Burundi ay soo wajaheen caburin iyo xanibaado aan horey loo arag kuwaasoo isugu jira xarig, handadaad, maxkamadeyn, iyo kormeer joogta ah.
Itoobiya waxaa weli dhibaato ku haya difaacayaasha xuquuqda aadanaha sharciga lagu diiwan geliyo hay’adaha aan dowliga aheyn iyo sharciga argagaxiso la dagaalanka kuwaasoo si gaar ah u bartilmaameed ka dhigtay difaacayaasha xuquuqda aadanaha iyo suxufiyiinta, ayuu yiri Xasan Shire oo ku daray in dowladda Eritrea ay weli fulin la’adahay go’aankii midowga Africa ee ahaa in ay sii deyso ama ay maxkamad cadaalad ku dhisan saarto suxufiyiinta la xirxiray 18kii September ee sanadkii 2001.
Xaalada Xuquuqda Aaadanaha ee Soomaaliya ma aysan sameyn wax horumar ah oo wanaagsan. “Dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed waxaa weli lagu dhibaateynayaa fowdada ka jirta dalka” ayuu yiri Xasan Shire oo intaa raaciyay in suxufiyiinta si daran loogu dhibaateeyay deeganada Puntland iyo Somaliland mudadii lixda bilood aheyd ee lasoo dhaafay.
“Waxaan ugu baaqeynaa golaha xuquuqda aadanaha ee midowga afrika in ay muhiimada koowaad siiyaan dambiyada aan la ciqaabin ee ka jira dalalka Burundi, Soomaaliya iyo Kenya” ayuu yiri Xasan Shire Sheekh oo ku booriyay golaha in ay sameeyaan baaris caalami ah oo ku aadan dambiyada xuquuqda aadanaha ee laga galo gobolka kuwaasoo aan lagu ciqaabin dalalka ay ka dhacyaan.
Fadhigan ayaa sidoo kale waxaa uu yahay mid muhiimad gaar ah taariikhi ah oo mas’uuliyiintii ka hadashay ay si gaar ah uga hadleen arrinta Soomaaliya.
Kulanka ayaa sidoo kale waxaa lagu doortay hogaan cusub oo guddoomin doono golaha xuquuda aadanaha ee Afrika mudada labada sano ee soo socota. Dalalka Nigeria iyo Rwanda ayaa loo doortay in ay noqdaan guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen.
Jaamac Nuur Jaamac
SBC International Banjul